OIC ဘာလဲ၊ မြန်မာပြည် ဘယ်လဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » OIC ဘာလဲ၊ မြန်မာပြည် ဘယ်လဲ
OIC ဘာလဲ၊ မြန်မာပြည် ဘယ်လဲ
Posted by nicolus agral on Nov 11, 2013 in Buddhism, Islam, Myanma News | 30 comments
OIC ဆိုတာဟာ Organisation of Islamic Cooperation ကို အတိုကောက်ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံပေါင်း ၅ရနို်င်ငံပါဝင်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မူစလင်နိုင်ငံများရဲ့ အကျိုး
စီးပွားကာကွယ်ရေး၊မူစလင်နိုင်ငံများ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေး စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်များကို ဝိုင်းဝန်း
၁၉ရာစုနှစ်လောက်ကတည်းက မူစလင်ဘာသာဝင်များအနေနဲ့ သည်လိုအဖွဲ့အစည်းမျိုးကို တည်
ထောင်ဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့ကြတယ်။၁၉၆ရခုနှစ် အစ္စရေး-ပါလက်စတိုင်း ခြောက်ရက်ကြာစစ်ပွဲအပြီး အစ္စရေးတို့
စစ်ပွဲအောင်မြင်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့သည်လို အဖွဲ့အစည်းမျိုးဟာ အရေးတကြီးလိုအပ်လာပြီလို့ မူစလင်
ခေါင်းဆောင်များကို တပ်လှန့်လိုက်သလိုဖြစ်သွားပါတယ်။သည်လိုနဲ့ မူစလင်ခေါင်းဆောင်များ စုစည်းပြီး
၁၉၆၉၊စက်တင်ဘာလ ၂၅ရက်နေ့မှာ OIC ကို စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။
စတင်ဖွဲ့စည်းချိန်မှာတော့ OIC ရဲ့အမည်က Organisation of the Islamic Conference ဖြစ်ပါ
တယ်။အဖွဲ့ရဲ့ကြေညာစာတမ်းထဲမှာ အစ္စလာမ်နိုင်ငံများရဲ့ လူမှုရေးနဲ့ စီးပွားရေးတန်ဖိုးများစောင့်ရှောက်ကာ
ကွယ်ဖို့၊ မူစလင်နိုင်ငံများအချင်းချင်း သွေးစည်းညီညွတ်ကြဖို့၊ နိုင်ငံရေး ၊စီးပွားရေး၊ယဉ်ကျေးမှု၊သိပံ္ပနည်း
ပညာဖွံ့ဖြိုးရေးစတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေလဲပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကြီး
ယနေ့ OIC အဖွဲ့ဝင် ၅ရနိုင်ငံမှာ ၅၆နိုင်ငံက ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများဖြစ်ပါတယ်။၂၀၀၈ခုနှစ်
မှာ OICအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများရဲ့ စုစုပေါင်းလူဦးရေဟာ ၁.၄ ဘီလီယံရှိပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတ ဂျောု့ဘုရှ်က ၂၀၀ရခုနှစ်၊ဇွန် ၂ရမှာ OIC ထံ တရားဝင်သံကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့
လွှတ်မယ်လို့ကြောညာခဲ့ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မူစလင်နိုင်ငံများရဲ့ အသံကို နားထောင်ဖို့၊
တဘက်ကလည်း အမေရိကန်တို့ရဲ့ခံယူချက်ကိုလည်း မူစလင်နိုင်ငံတွေ သိစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တော့
OIC က လူ့အခွင့်အရေး ကြောညာစာတမ်း ဆိုတာကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ဖူးတယ်။ အစ္စလာမ်များ
အတွက် ကိုင်ရိုလူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း Cairo Declaration of Human Rights in Islam လို့
အမည်ရတယ်။သို့ပေမယ့် အဲသည်လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းဟာ ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ရဲ့
ကြေညာစာတမ်းနဲ့မတူပါဘူး။အထဲမှာပါတဲ့အချက်တွေဟာ လဲ ညှိလို့မရအောင်ကွဲလွဲနေတာတွေ အများကြီး
OIC ကို မေးချင်တဲ့ မေးခွန်းတစ်ခု
OIC က အကြမ်းဖက်မှုများနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့လဲ ဆန့်ကျင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။သို့ပေမယ့် အကြမ်း
ဖက်မှုဆိုတာကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တဲ့နေရာမှာတော့ သူများနိုင်ငံတွေနဲ့မတူပါ။အကြမ်းဖက်မှု (terrorism)
ဆိုတာဟာ တစုံတယောက်က တခြားသူတစ်ဦးဦးကို ညှင်းပန်းတာ၊နှိပ်စက်တာ၊အကြမ်းဖက်တာမှန်သမျှ
ကိုခေါ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့်ပါလက်စတိုင်းတစ်ယောက်က အစ္စရေးမြို့လယ်ခေါင်မှာ အသေခံဗုံးခွဲလို့ လူ၁၀၀
လောက်သေသွားရင် OICရဲ့သတ်မှတ်ချက်အရ အကြမ်းဖက်မှု မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ရခိုင်မှာ ဘင်္ဂလီ
တစ်ယောက်က ရခိုင်ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ဦးကို သတ်ဖြတ်ရင်၊ရခိုင်သူလေးတစ်ဦးကို မုဒိန်းကျင့်ရင် အဲဒါဟာ
အကြမ်းဖက်မှုလို့ သတ်မှတ်ရဲ့လား ဆိုတာကိုOIC ကို မေးချင်တယ်။
အိနိ္ဒယဟာ ကတ်ရှ်မီးယားအရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး OIC နဲ့ အဆင်မပြေပါ။ အိနိ္ဒယမှာ ကမ္ဘာ့မူစလင်
ဦးရေရဲ့ ၁၀% ရှိပေမယ့် OIC ထဲမဝင်ပါ။OIC ကလဲ လက်မခံပါ။
ထိုင်းနိုင်ငံဟာလဲ နိုင်ငံတောင်ပိုင်းက ပြည်နယ်များမှာ မူစလင်လူနည်းစုတွေကို မတရားဖိနှိပ်တယ်
ဆိုပြီးOIC ရဲ့ ကန့်ကွက်မှုကို ခံရပါတယ်။ ပတက်နီဆိုတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းပြည်နယ်က ပြည်ပြေး မူစလင်
ခေါင်းဆောင်ဟာ ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ ဗုဒ္ဒဘာသာပြည်သူ့စစ်တွေကို ဖွဲ့စည်းပြီး မူစလင်တွေကို နှိပ်ကွပ်တယ်
လို့ OIC မှာ တက်ပြောပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ ဘင်္ဂါလီများဟာ နိုင်ငံသားမဟုတ်ပါ။သူတို့ကို ကိုယ်စား
ပြုမယ့် မြန်မာ နိုင်ငံသားဘဂါင်္လီ ခေါင်းဆောင်ဆိုတာလဲ မရှိပါ။မြန်မာနိုင်ငံသား ဘင်္ဂါလီပြည်ပြေးဆိုတာလဲ
မရှိပါ။ ပြေးစရာမလိုပါ။အရင်ထဲကိုက နိုင်ငံသားမဟုတ်ပါ။
ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက OIC ကို သည်လို တုံ့ပြန်ပါတယ်။“ထိုင်းနိုင်ငံဟာ နိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့
လုံခြုံရေးကို ကာကွယ်ပေးနေပါတယ်။ဘယ်ဘာသာဝင်ဖြစ်စေ နိုင်ငံသားမှန်လျှင် နိုင်ငံသားတစ်ဦးရဲ့
အခွင့်အရေးညီတူညီမျှ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရဲ့ တည်ငြိမ်မှုကို OIC
ကအမှန်တကယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ မူစလင်ဘာသာဝင်တွေအကြား
သွေးထိုးပေးနေတဲ့ မူစလင် အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေကို ပဲ နိုင်အောင်ထိန်းပေးပါ။”
ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးရဲ့ အဆိုအရ ၂၀၁ဝမှာ OIC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ
အနေနဲ့ ဒုက္ခသည်ပေါင်း ၁၈သန်းကို နေရာပေး၊အစားကျွေး ကယ်တင်ခဲ့တယ်လို့သိရတယ်။ရခိုင်က
အခြေအနေမဲ့တွေကိုလဲ သူတို့ကယ်တင်ပေးနိုင်ပါစေလို့ တောင်းဆိုရမှာပါ။၂၀၁ဝမှာ OIC ရဲ့အရပ်ရပ်ရံပုံ
ငွေ ယူအက်စ်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၆၅ဝ ရှိပါတယ်။သည်ငွေဟာ ကမ္ဘာမရှိခဲ့ဖူးတဲ့ လူမျိုးစုတစ်ခုပေါ်လာ
နှစ်ပေါင်း ၅ဝလောက် အငတ်ငတ်အပြတ်ပြတ်နဲ့ နေလာခဲ့တဲ့ တို့ရွှေတွေ ဝန်ထမ်းဖြစ်စေ၊သာမန်
ပြည်သူဖြစ်စေ သည်းခြေကြိုက် ငွေရဲ့ဒဏ်ကိုခံနိုင်ပါမလား။ဘဂါင်္လီတွေကို ငွေယူပြီး ပြည်ဝင်ခွင့်ပေးခဲ့တာ
လဲတို့ရွှေတွေပဲ။နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးဆိုတာကို မခံစားဖူး၊မသိခဲ့ဖူးတော့
ငွေဆိုတာအကြံအဖန်နဲ့ရှာမှသူဌေးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အရိုးစွဲစိတ်နဲ့ တို့ရွှေတွေဟာ ဘယ်လူမျိုးခြားကိုဖြစ်ဖြစ်
ပညာနည်းနည်းတတ်တဲ့သူ၊လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သူ က တိုင်းပြည်အတွက်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ နိုင်ငံအတွက်
အကျိုးအမြတ်နဲနဲ၊ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားများများယူပြီး ကိုယ့်တိုင်းပြည်က မြေကြီးလဲရောင်းစား၊ ရေလဲရောင်း
စား၊သစ်လဲရောင်းစား။ ပညာမတတ် အောက်ခြေလူတန်းစား၊လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိသူ ကတော့ ရောင်းစားစရာမရှိ
တော့ နောက်ဆုံးလူကိုပါ ရောင်းစားကြတယ်။ဒါကို လူကုန်ကူးမှုကာကွယ်ရေးဆိုပြီး တားဆီးတော့ရော
မြန်မာပြည်ရဲ့ ထင်သာမြင်သာပြသနာက ဆင်းရဲမွဲတေမှုဖြစ်ပါတယ်။ မထင်သာ မမြင်သာတဲ့ပြသ
နာကတော့ အခုအချိန်ထိ အကင်းမသေသေးတဲ့ ခရိုနီတို့၊ဆွေမျိုးဦးစားပေးတို့စတဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြသနာတွေ၊
ရေရှည်ကို မျှော်တွေးဆင်ခြင်နိုင်မှုအားနည်းတဲ့ ပညာရေးချို့တဲ့မှု ပြသနာတွေဖြစ်ပါတယ်။
ပြည့်အင်အားသည် ပြည်တွင်းမှာသာ ရှိသည်ဆိုသလို ပြည့်ပြသနာသည်လည်း ပြည်တွင်းမှာသာရှိ
ပါတယ်။ယနေ့ မြန်မာပြည်ဆင်းရဲနေတာဟာ ဘယ်လူမျိုးကမှ ကျွန်ပြုနေလို့ မဟုတ်ပါ။ ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်း
ယနေ့ ရခိုင်အရေးမှာလဲ နိုင်ငံသားအားလုံးက အသိစိတ်ကို်ယ်စီနဲ့ ဝိုင်းဝန်းကာကွယ်ရင် ဘယ်သူ့ကို
မှမှုစရာ မလိုပါ။ အစ္စရေးတောင်မှ ရန်သူနိုင်ငံတွေကြားမှာ ဘယ်လိုရပ်တည်ရှင်သန်နေသလဲ။မြန်မာပြည်က
သမ္မတကြီးကို နိုဗယ်ဆုမပေးတဲ့အတွက် တာဝန်ရှိသူများကို ကျေးဇူးတင်တယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗယ်
ဆုရသွားရင်သမ္မတကြီးကို မြန်မာကမပိုင်တော့ပါ။ အားနည်းသူလူနည်းစု ရခိုင်က သနားစရာ့ဘင်္ဂါလီလေး
တွေကိုနိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေ့းဆုရှင်ပီပီ လူသားချင်းစာနာပြီး သနားရမယ်ဆိုရင် တို့ရွှေတွေသေပြီ။သည်အချိန်
မှာ ရွှတိုင်းပြည်က လိုအပ်နေသူဟာမြန်မာ့အရေးကို ကမ္ဘာမှာ ပြောပေးမယ့်သူဖြစ်ပါတယ်။ ဘီဘီစီတို့၊ ဗီအို
အေတို့လို မြန်မာထဲက ဘင်္ဂါလီအရေးကိုကမ္ဘာသိအောင်ပြောပေးမယ့်၊ သွေးထဲမှာ ငပိဓာတ်တွေ အများကြီး
ရှိနေပေမယ့် အခုလက်ရှိ ပေါင်မုန့်စားနေသူ များမလိုအပ်ပါ။ဗုဒ္ဓဘာသာလူနည်းစုပဲရှိတဲ့ ရခိုင်မောင်တော
ဒေသမှာလူသားချင်းစာနာချင်သပဆိုရင် ရခိုင်ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေကိုပဲစာနာပေးပါ။ဘင်္ဂါလီတွေကို ကယ်တင်
မယ့်သူရှိပါတယ်။ရံပုံငွေ ဒေါ်လာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ တို့ရွှေရခိုင်၊ဗမာတွေကတော့ရခိုင်မှာ ကယ်မယ့်
ယနေ့ မြန်မာပြည်မှာ အထူးလိုအပ်နေသူဟာ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး စေတမန်မဟုတ်ပါ။မြန်မာ့အရေး
ဆောင်ရွက်သူမျိုးချစ်စိတ်ရှိတဲ့၊ဘယ်နိုင်ငံရဲ့မျက်နှာကိုမှ ထောက်ထားစရာမလိုတဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်
ပါတယ်။အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်တွေ နိုးကြားနေတဲ့ယနေ့ ရွှေမြန်မာမှာ မှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုသာရှိရင်
နောက်ကလိုက်မယ့် ပြည်သူတွေအသင့်ရှိနေပြီဟု ထင်မြင်မိပါကြောင်း။
ဖတ်ပဲ ဖတ်သွားပါတယ် ။
မအေ -ိုး းnicolus agral အစ္စလာမ်အားလုံးဘင်္ဂလီ စာရင်ထဲထည့် တောင်ကုတ်မှာ
မင်းတို့အမျိုးယုတ်ဘဲ ၊မုဒိန်းမှုမဟုတ်ကိုမုဒိန်းမှုလုပ်ဇာတ်ဆင်၊ပြသနာမဟုတ်တာကိုပြသနာဖြစ်လာအောင်လုပ်ဇာတ်တွေနဲ့ တနိုင်ငံလုံးမြို့တိုင်မှာလုပ်ဇာတ်ဆင်လာတာ မင်းတို့ဟိနယာနမျိုးဘဲ
အေးလော အဖေဒေဝဒတ် အမေစိတ္တမာဏ နဲ့မျိုးစပ်ထားတော့ဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့
တောင်ခွဲခြားမသိတာ နွားဘဲ (ဒါမှမဟုတ်)ချီးနေတဲ့ဝက်မျိုးဆိုတော့ ဇာတ်နိမ့်သုဘရာဇာ ဟိနရာနမျိုး ဒီလောက်တော့ရှိမှပေါ့ ။ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်အမေ/နှမကိုကိုယ်ပြန်ယူတဲ့ ရခွီးမျိုးလား
မင်းအမေလင် OIC ကိုခေါ်တာလဲမင်းအမေလင်တွေဘဲ
ဒုက္ခရောက်နေတုန်းကူပါကယ်ပါ ဆိုပြီ OIC အပါအဝင်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတစ်ကာမှာ
အရှက်မရှိ သူတောင်စားလုပ်နေတာအရှက်မရှိတာ အေးလေ သုဘရာဇာမျိုးဆိုတော့
ဘယ်ကျေးဇူသိပါမလဲ့ ။OIC ကပေးတာကြတော့ယူတယ် တကယ့်ဒုက္ခသည်တွေဆီ
ရောက်မရောက်လာစစ်မယ်ဆိုတော့ဆန္ဒပြခိုင်ပြီးမောင်းထုတ်တာကိုယ့်ထမင်းကျွေးတဲ့လက်ကိုယ့်ပြန်ကိုက်တဲ့ အမျျိုးယုတ်အသိဉာဏ်မဲ့စူတိုက်တိုင်ကိုက်တဲ့ ရခွီး(ခွေး)မျိုးဆိုတော့ ခွေးနဲ့နှိုင်းရတာခွေးတောင်သိက္ခာကျတယ်
တရား မျှတစွာ ရှုမြင်ရမယ် ဆိုရင် ၊
သူ့ အဖိုး အဖွား တွေ လက်ထက်က မြန်မာ နိုင်ငံ ထဲကို ဝင်ခဲ့တယ် ဆိုပါတော့ ၊
သူ့ အဖေ အမေ တွေကို ၊ ဒီနိုင်ငံမှာ မွေးရင် ၊ အနဲဆုံး ၊ အမြဲတမ်း နေထိုင်ခွင့် ပေးရမယ် ။
သူ့ အဖေ အမေ က ထပ်မွေးလာတဲ့ သူ့ ကိုတော့ နိုင်ငံသား အဆင့် ပေးကို ပေးသင့်တယ် ။
အဲဒီတော့ကာ ၊ အကြမ်းဖျင်း ပြောရရင် ၊
” ဘင်္ဂါလီတွေကို နိုင်ငံသား ပေးသင့်ပါတယ် “
ဒီမှာ ဆွေးနွေးတဲ့ သူတွေကိုလည်း ဆဲစရာမလိုဘူးလေကွယ်။
သတ္တိရှိရင် ဒီ ဘင်္ဂလားတွေကို ဆွဲသွင်းတဲ့သူတွေ၊ အိုအိုင်စီကို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့ အစိုးရကို မိုးမွှန်အောင် ဆဲပါကွယ်။
ဂါရဝ တရားလေးရှိသော မျိုးချစ်လေးတွေ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
အဘ ဖောကိုဆဲရင် အပြင်မှာဆိုလေကုန်မယ် online မှာဆိုလက်ညောင်းတာပဲအဖတ်တင်မယ်
ဆဲတယ်ဆိုတာ အဆဲခံရလို့နာတဲ့သူကို ဆဲတာပဲအကျိုးရှိတာ
(သူ့ အဖိုး အဖွား တွေ လက်ထက်က မြန်မာ နိုင်ငံ ထဲကို ဝင်ခဲ့တယ် ဆိုပါတော့ )
မူရင်းနယ်ခံတွေနဲ့ရော ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ၊ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်ခဲ့ရဲ့လား
(သူ့ အဖေ အမေ တွေကို ၊ ဒီနိုင်ငံမှာ မွေးရင် ၊ အနဲဆုံး ၊ အမြဲတမ်း နေထိုင်ခွင့် ပေးရမယ် ။)
(သူ့ အဖေ အမေ က ထပ်မွေးလာတဲ့ သူ့ ကိုတော့ နိုင်ငံသား အဆင့် ပေးကို ပေးသင့်တယ် ။)
မူရင်းနယ်ခံတွေနဲ့ရော ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ၊ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်မှာလား
သူ့ အဖိုး အဖွား တွေ လက်ထက်ကလဲ လူသတ် ၊ မုဒိန်းကျင့် ၊ သူတို့ဘာသာထဲအတင်းအကြပ်ဝင်ခိုင်း
သူ့ အဖေ အမေ တွေ လက်ထက်ကလဲ လူသတ် ၊ မုဒိန်းကျင့် ၊ သူတို့ဘာသာထဲအတင်းအကြပ်ဝင်ခိုင်း
တခြားနိုင်ငံတွေမှာအဲလိုပဲလုပ်တယ်နော်အဘ ပြီးမှဥပဒေနဲ့ပြန်ချုပ်တာ။ ဒီနိုင်ငံက ဥပဒေမစိုးမိုးတော့ နဲနဲတော့စိုးရိမ်စရာပေါ့။
ကျုပ်တို့ မြန်မာတွေများ OIC ကို ကျတော့ ကန့်ကွက်ကြတယ် …..
OIC ကို ဘယ်သူတွေ လက်ခံခဲ့သလဲ ….။
OIC ဆီက လူသားချင်း စာနာမှု အကူအညီ ဒေါ်လာ သန်း (၅၀) ကို တော့ ဘယ်သူတွေ လက်ခံခဲ့သလဲ ဆိုတာကို မေ့နေကြတယ်။
INGO တွေ ရခိုင်မှာ ဘင်္ဂလီတွေကိုပဲ ကူညီတာကို ကန့်ကွက်တာမှန်ပေမယ့် အဲဒီ ငွေတွေ ဘယ်က လာသလဲ ….။
ပြန်လည် ထူထောင်ရေးမှာ ဘယ်သူ့ ငွေ တွေ သုံးနေသလဲ …. ကန့်ကွက်ဖို့ကျတော့ နှာစေးနေကြတယ် ….။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ခင်ဗျားတို့ ဘိလပ်စာ တတ်ရင် ဒါလေးကိုတော့ ဘာသာပြန်ကြည့်ပေးပါဗျား။
မေးခွန်း တစ်ခုပဲ မေးမယ် ….။
G to G မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောတဲ့သူတွေ ….။
NLD က ဖိတ်တယ်လို့ ပြော တဲ့သူတွေ …။
seven foreign ministers and senior officials ပါလာမယ် ဆိုတာ
ဘယ်လို ခရီးစဉ် ဆိုတာကိုသိရင်
ဘယ်သူ့ ခွင့်ပြုချက်လည်း ဆိုတာကိုသိရင်
မကန့်ကွက်ပဲ အမြီးကုပ်ပြီး မပြေးကြေးနော်
Photo – Saudi Gazette
ခက်တော့ခက်တယ်ဗျ… ဒီမြန်တျန့်ဂေဇက် ချိအယ်ဒီတာကိုယ်၌က ပန်းသေးဖြစ်နေဒေါ့ အသာငြိမ်နေဒါဗဲ ကောင်းဒယ်။။ ဒါထက် သာမီးဒေါ်ဂလေး အရွယ်ရောက်လာ သိပ်လှမှာဗဲ.. ပန်းသေးမတွေ သိပ်ဂွတ်ဒ်တာ မြင်ဖူးသဗျ… ပါပါး မာမွတ်ခိုမ် ဆလံမာယေးကွန်း..
In their bid to findalasting solution to the Rohingya Muslim minority in the Buddhist-dominated Asian country
The only solution is Get OUT
(OIC ဆီက လူသားချင်း စာနာမှု အကူအညီ ဒေါ်လာ သန်း (၅၀) ကို တော့ ဘယ်သူတွေ လက်ခံခဲ့သလဲ ဆိုတာကို မေ့နေကြတယ်။)
Problem ကို ဘယ်သူလုပ်တာလဲ
ကိုယ့်ကို ဓားနဲ့ထိုးပြီး(with intention)မှ ဆေးရုံပို့ပေးတယ့်သူကိုကျေးဇူးတင်နေရဦးမယ် ဟာ ဟ
အဲဒီတော့ -ီးပဲ အစိုးရ ၊ -ီးပဲ သိန်းစိန်
မီတာခတိုးတာ မင်းတို့ပဲလုပ် မင်းတို့ပဲတား အမှတ်ယူ -ီးပဲ
လူဆိုးတွေကို မင်းပဲလွှတ် မင်းပဲသူရဲကောင်းလုပ်ပြီးကယ် ဗမာကားထဲမှာပဲရမယ်
ဒီစောက်ချိုးနဲ့တော့ Sea Game မှာ ငိုချင်းနဲ့မဖွင့်လိုက်ရတောင် ပိတ်ပွဲမှာ သေချာပေါက် ငိုချင်းဆိုနေရမယ်
သွေးဆူနေတဲ့လူအုပ်ကို(mass effect) ခေါင်းစဉ်တခုပေးလိုက်
အဲဒီမတိုင်ခင်ကာလမှာ OIC နဲ့ လူထုစိတ်ထဲ တအုံ့နွေးနွေး ဖြစ်အောင်လုပ်ထား
ဟာ ဟ ပျော်စရာကြီး
ဆန် ဆီ ဆား ကုန်ခြောက် တွေဝယ်စုထားမယ်
by the way, who are intruder, who are ignition party, which religion is mother of terror, who are hostile religious nations
can you answer me wow ?
ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ အယူအဆကို ကောင်းကောင်းပြောလည်းရပါတယ်
ကျေးဇူးပြုပြီး အင်တာနက်ထဲ.. မဆဲပါနဲ့..။
အဖြေတခုရအောင်ထုတ်တဲ့အခါ.. အစွန်းတွေလွှတ်နိုင်ရင်.. ကောင်းတဲ့အဖြေထွက်လာမယ်..။
အဲဒီအဖြေကို.. ချယူကျင့်သုံးရင်.. ကောင်းတဲ့ရလဒ်ဖြစ်လာနိုင်ခြေအများကြီးရှိပါတယ်..
ဆိုတော့… ဒီအထဲဝင်လာနေရင်/ရေးရင်.. ဒီကစည်းကမ်းလိုက်နာပါခင်ဗျား..လို့ပဲ..။
9. မည်သူ့ကိုမှ မည်သည့်အကြောင်းနှင့်မှ ရိုင်းစိုင်းစွာဆဲဆိုခြင်း၊ တိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုရ။
လူတယောက်ရဲ့တုန့်ပြန်ပုံ အတိမ်အနက်ဟာ သူ့ရဲ့နစ်နာမှု ခံစားရမှုနဲ့ တိုက်ရိုက်အချိုးကျပြီး ချုပ်တီးနိုင်စွမ်းနဲ့ ပြောင်းပြန်အချိုးကျတယ်ဗျ
မြန်မာနိုင်ငံကိုကြီးကို တိုးတက်စေချင်ရင်…. OIC ကို ကိုယ်ပိုင်အမြင်နဲ့ကန့်ကွက်ရင် အပြုသဘောဆောင်တဲ့အရေးအသားတွေနဲ့ ရေးလို့ရပါတယ်..အစိုးရကို ထိုင်ဆဲနေရုံ… ကိုယ်နဲ့အမြင်မတူသူကို ထိုင်ဆဲနေရုံနဲ့ မြန်မာပြည်ကြီး တိုးတက်လာမည်မဟုတ်.. OIC က နောက်ပြန်လှည့်မည်မဟုတ်…
nicolus agral ရေ
ကိုယ်ရေးတဲ့စာပေဟာ အများဖတ်နိုင်တဲ့နေရာမှ ရေးတင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် အယူအဆတူတာလည်းရှိသလို မတူတာတွေလည်းရှိပါတယ် အဲဒီတော့ အမြင်အမျိုးမျိုးနဲ့ ဝေဖန်ကြ ရေးကြမှာပါ။ အဲဒီအခါ မောင်ရင် လက်ခံတယ် မခံဘူးကတော့ မောင်ရင့်သဘောဆန္ဒဖြစ်ပြီး လက်မခံနိုင်လဲ ကွန်မန့်နဲ့ ပြန်ရေးခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ သတိပြုစေချင်ပါတယ် ဒီမြန်မာ့ဂဇက်မှာ ကိုယ့်ရေးတဲ့စာကို ဖတ်ဖြစ်တဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်ဆိုတာ တစ်ယောက်မက ရှိတာမို့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကိုတော့ လေးစားသင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆဲ မပြော/မရေး သင့်ပါဗျ။
I accept that statement “agree to disagree”.
But I can’t agree if someone talks ” I want to kill you. I want to burn your house. I want to rape your relative ladies.”
OIC is hostile.
Although neither an enemy organization nor hated organization, but OIC is hostile organization.
I don’t trust this OIC. Good for nothing
CIN III is notacancer but it can change to cervical carcinoma သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ( one of the most killing cancer of women )
that mean keeping CIN III cervix in your body is keeping bomb inside your body
If you want peaceful condition, stay away from OIC and it relatives
အစ်ကို nicolus agral ခင်ဗျာ ..
ဒီရွာက လွတ်လပ်စွာကွဲလွဲခွင့်ရှိတဲ့ နေရာပါဗျာ ။ မတူတဲ့အမြင်တွေကို နားလည်ပေးပြီး .ရွာသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အစ်ကိုလဲ …မဆဲမဆိုပဲ ..ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့ ရွာအဖြစ် ဂုဏ်ယူလိုက်ရအောင်ပါ ။
ဆောင်းပါးရှင် ရေးတာလေးတော့ ကောင်းပါရဲ့ဗျာ။ ဒါကတော့ ပြောရလည်း အတော် ခက်တယ်ဗျ။ ကိုကြောင်ကြီး ပြောသလို သူ့ယောက္ခမလောင်း အယ်ဒီတာ ကိုယ်တိုင်က မူဆလင်ကြီး ဆိုသလိုပေါ့ဗျာ။
OIC ဝင်လာရင်တော့ ရေရှည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အတွက် မကောင်းတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ခက်နေတာက ဒီပြဿနာဟာ လက်မခံချင်လို့ မရတော့ဘူး ဆိုရမလောက် အစိုင်အခဲနဲ့ ဖြစ်နေပြီဗျ။ ကျနော်ကတော့ သိပ်လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု ရှုထောင့်တို့ ဘာတို့ကနေ မကြည့်တတ်ဘူး။ ဘင်္ဂါလီတွေကို အကုန်သတ် ဆိုတာမျိုးကလည်း ဘယ်လိုမှ လုပ်လို့ မရတော့ဘူး။ သိပ်များလွန်းလို့ စက်သေနတ်နဲ့ ပစ်တောင် ကုန်ပါ့မလား မသိဘူး။ အဲဒီလို လုပ်ဖို့လည်း ဒီနေ့ခေတ်မှာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ ဒီတော့ သူတို့ကို ဘယ်လိုမှ ရှင်းထုတ်လို့ မရမယ့် အတူတူ သူတို့ကို ဘယ်လို ထိန်းချုပ်မလည်း ကိုယ့်ဘက်ကို ဘယ်လို ကာကွယ်မလည်း ဆိုတာက ပိုပြီး ကောင်းတယ်ဗျ။
တကယ်တော့ မိန်းကလေးတွေကိုသာ အမျိုးစောင့်ဖို့ အဓိကထားပြီး ပြောနေကြတာ။ မြန်မာယောကျာင်္းတွေတောင် ဘာသာခြားမိန်းမနဲ့ ညားတာနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပစ်ပြီး သူများဘာသာကို လွယ်လွယ်ဝင်သွားကြတာ။ ကိုယ်တိုင် မြင်ဖူးသလို သူများဘာသာဝင် အချင်းချင်း ပြောနေတာလည်း နားနဲ့ဆတ်ဆတ် ကြားဖူးတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အခြေခံ သိပ်အားနည်းလို့ပဲ။
” ယနေ့ ရွှေမြန်မာ မှာ မှန်ကန်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုသာ ရှိရင် ”
အမှန်ကို မြင်ကြည့်ရရင် ၊ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှု သာ မကဘဲ ၊
ဉာဏ် အမျှော်အမြင် နှင့် ပြည့်စုံတဲ့ ဒီမို အင်အားစု / နောက်လိုက် တစ်ခု စတင် ပေါ်ထွန်းနေပါပြီ ။
အခု မွတ်ဆလင် – ဗုဒ္ဓဘာသာ / ကုလား – ရခိုင် ဗမာ အရေးအခင်းတွေ ကြားမှာ ၊
၁ ။ လူထု နှင့် ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် အမေ စု က အစ ၊
၂ ။ ၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေး ခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင် အလယ် ၊
၃ ။ နိုင်ငံခြားရောက် တော်လှန်ရေးသမား မိုးသီးဇွန် အဆုံး ၊
၄ ။ နိုင်ငံရပ်ခြားရောက် အမြင်ကျယ်ပြီးသူ မြန်မာနိုင်ငံဖွားတွေကော ၊
၅ ။ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ ပညာတတ် အားလုံးလောက် နီးနီး ဟာ ၊
လူကြိုက် များ လောက်မယ့်ဘက် ( မဲ ရမယ့်ဘက် ) ကို သာကူး မလုပ်ဘဲ ၊
သူတို့ တရားမျှတမယ် ထင်တဲ့ ဘက်ကနေ ၊ ရဲရဲ ရင့်ရင့် ရပ်တည်ခဲ့ ၊
ဒီမိုကရေစီ မှတ်ကျောက် အတင်ခံ ခဲ့တာကို ၊ တွေ့ခဲ့ ရပါတယ် ။
အဲဒီတော့ကာ ၊ ကျနော့်အမြင်မှာတော့ ၊
ကျနော်တို့ နိုင်ငံ ဟာ ခေါင်းဆောင်ကောင်း ( အမေစု ၊ မင်းကိုနိုင် စသဖြင့် ) နှင့် ၊
တရားမျှတပြီး ပညာတတ် အမြင်ကျယ်တဲ့ နောက်လိုက် အချို့ကို စုစည်းမိနေပါပြီ ။
လက်ရှိမှာလည်း ၊ အမေစု က NLD မှာ ၊ လူ့အခွင့်အရေး နှင့် ဒီမိုကရေစီ အစစ်အမှန် ကို ၊
ပါတီတွင်း သင်တန်းတွေ ပေးနေပါတယ် ။ အဲဒီ Capacity Building တွေ အားကောင်းလာရင် ၊
တရားမျှတပြီး ပညာတတ် အမြင်ကျယ်တဲ့ နောက်လိုက် အင်အားစုကြီး ပေါ်ထွန်းလာတော့မှာပါ ။
တိုင်းပြည် ရဲ့ နောင်ရေးအတွက် ၊ ကြည်နူးစရာ အလင်းရောင်လေး တစ်ခုပါဘဲ ။
ဆဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ဒေါ့ဗျာ… တချုို့ကြတော့ အကဲဆတ်တယ်.. တချို့ကြတော့ နားလည်မှုရှိတယ်..။ ဥမပါဗျာ.. မိုက်ကယ်ဂျော်လ်ကီအောင်ပုလိုမျိုးကြတော့ ဟေ့ကောင် ကပု ယီးဗဲလို့ဆဲလဲ မနာ၊ ဟိတ်ကောင် ကပု ယီးလားလို့ မေးလဲ မဖြေ.. လား ပလာတာ ကျွေးရသလိုဗဲ.. ဖီးလ် မလာဗူး..။ ဘာရယ်မဟုတ် ကြုံဒုံးလေး ဝင်ဆွေးနွေးတာ.. ယီးလို မိုလိုတော့ပ် မလုပ်နဲ့ ကပုရေ… နင်မနာဓာတ်တာ နာတိရယ်..
မအေ -ိုး nicolus agral အစ္စလာမ်အားလုံးဘင်္ဂလီ စာရင်ထဲထည့် တောင်ကုတ်မှာ
ရောက်မရောက်လာစစ်မယ်ဆိုတော့ဆန္ဒပြခိုင်ပြီးမောင်းထုတ်တာကိုယ့်ထမင်းကျွေးတဲ့လက်ကိုယ့်ပြန်ကိုက်တဲ့ အမျျိုးယုတ်အသိဉာဏ်မဲ့စူတိုက်တိုင်းကိုက်တဲ့ ရခွီး(ခွေး)မျိုးဆိုတော့ ခွေးနဲ့နှိုင်းရတာခွေးတောင်သိက္ခာကျတယ်
ဟိတ်ကောင် ဆလိုင်းဖင်ပြောင်.. မင်းဂ အလာဂျီးဗဲကွ.. ငါလည်း နင့်လို ဖင်ဂေါင်းကျယ်ချင်လို့ ကုရာန်ကျမ်း ပို့ပေးဇမ်းပါ..။ အာယေဗျိလိုဒေါ့ မပို့နဲ့ကွာ.. မြန်တျန့်ဘာသာနဲ့ ပို့ပေး..။ အဲ့ကျမှ မာမွတ်တို့ လျှာပွတ်တို့ နာမည်ထည့် ပြောမယ်.. ဒီအိပ်ချ်အယ်လ်တို့ ဘာတို့လို အလ္လာရှင်မြတ် မယုံသူတွေရဲ့ အမြန်ချောပို့စနစ်နဲ့ မပို့နဲ့ကွာ.. အဲဒါတွေက ဝက်သားတွေ သယ်ဒတ်တယ်.. အာရပ်ဓါးကောက် ၇၈၆ ဘင်ဂါလီ အမြန်ချောပို့နဲ့ ဘင်းဂလားဒေ့ရှ်နေစပ်က ပို့ပေး.. စောင့်နေမည်… ဒုံး ဒိုင်း ဂွမ်း (စောင့်သံ)
.. ကျော်ကတော့ ဘာမှမသိဘူးခင်ဗျ
.. အစ်ကိုကြီးတို့ အဘတို့အနေနှင့်
.. မအေ -ိုး တို့
.. -ီးပဲ တို့ဆိုတာ မြန်မာစာအရေးသားကို လွန်စွာထိခိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား
.. ပြောခြင်တာက အင်္ဂ ါမစုံတဲ့ အက္ခရာအစုဖြစ်ပါတယ်
.. ဒါ့ကြောင့် အစ်ကိုကြီးတို့ အဘတို့ အနေနှင့်
.. အက္ခစုံတဲ့ စာပေတစ်ချို့ကို လေ့လာနိုင်ဘို့ စေတနာဗလပွနဲ့ ရေးချပြလိုက်ဘါဒယ် ခညာ
.. ( အရဂါးနောက်ဒါ )
မိုက်ကယ်ဂျီး တော်ပါပေတယ်… ခွီး.. ခွီး…ခွီး
အေရိုး ဘင်္ဂါလီကုလားတွေကို အဘဘုတ်တော့ မကြိုက်လှ မရှိစေချင်လှပေမဲ့။
မြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားစိတ်အပြည့်အဝရှိတဲ့ မူဆလင်တွေကိုတော့
ကာကွယ်ပေးသင့်တယ်မြင်တယ်။ ဒါမှလည်း ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံပီသမှာပဲကွဲ့။ ဟိုနေ့က မြန်မာအသင်း မလေးမှာ ဘောလုံးသွားကန်တုန်းကလားမသိဘူး။ ပြန်ကြည့်မိတာ
ဆာရီလေးတွေခြုံပြီး မြန်မာအလံလေးကိုင်အားပေးနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားမူဆလင်မလေးတွေမြင်တော့
ဒီလို မျိုးချစ်စိတ်ရှိတဲ့ ကုလားတွေလဲ ရှိပါသေးတယ်ကွဲ့။ ။
အဘဘုတ်လေး မူဆလင်မလေးတွေကို သိပ်သနားတာပဲ။ အသက်သာ နှစ်ပြန် ပြန်ငယ်သွားရင်
မင်းတုန်းမင်းတို့လို ဘုရင်စိတ်မွေးပြီး သူရို့လေးတွေ ၁ဝယောက်လောက်တော့ သစ္စာလမ်းလေး
OIC က အခုမှပါ..
တချို့ NGO တွေရဲ့ နောက်က supporting တွေကို လေ့လာသင့်တယ်..
တကယ်တော့ NGO ဆိုတာလဲ နောက်ကျနေသေးတယ်
ဟိုးအစောကြီးကတည်းက ပြည်ပ လုပ်ငန်း/ထုတ်ကုန် တွေရဲ့ Agent အမည်ခံပြီး တကယ်လဲ အေးဂျင့်လုပ်ရင်း တဖက်ကလဲ စာတိုက်ပုံးလုပ်နေတာတွေ မြို့ကြိးပြကြီးတိုင်းမှာပါ..။
အဲဒါ အခု တရေးနိုး ရန်ကုန်တဝက် (better half) ကုန်မှ ထအော်နေလဲ မထူးတော့ပါဘူး…။
သူများက စုထားဖွဲ့ထားတာ ကမ္ဘာတစိတ် ရှိတယ်
ကျုပ်တို့က နှစ်ယောက်နဲ့တစ်ပိုင်းဆုံမိရင် အချင်းချင်းလှည့်ကိုက်တတ်တာ…
အဲဒါလေး အရင်ပြင်နိုင်မှ ဆက်ပြောလို့ဖြစ်မှာ….။
အဲဒီ ဒေါ်လာသန်း၆၅ဝ ဆိုတာ ရေခဲတောင်ကြီးရဲ့ ရေပြင်ပေါ်ပေါ်နေသလောက်သာရှိကြောင်းတော့ အားလုံးရိပ်မိလောက်ပါတယ်နော…။
အပေါ်ကလူတွေ အတော်ပျော်နေဂျဒယ် ထင်ဒယ် …
ယီးဘဲဒွေရော .. ယီးယားဒွေရော ..
အိုကွယ် .. စုံလို့ဘာဘဲ …
ကိုယ်ဒွေမတော့ အဆဲလည်း ခံရ၊ ကိုယ်ကလည်း ဆဲရနဲ့
အဆဲသံသရာဒဲ လည်နေဒါ မဆန်းဒေါ့ဘာဘူးးးး
သူဆဲ ကိုယ်ပြန်ဆဲပလိုက်မှာပေါ့ .. လွယ့်လွယ်ဂလေးဘဲဂို …
ဥမပါ … အပေါ်ဂ ဥကြောင် နဲ့ ဥအောင်ဘု တို့က ဂလိုဆဲတယ် ဆိုဘာစို့ ..
ဟဲ့ကောင် အံချာဒုံး .. နင့်ကို နာဒို့ဂ ယီးဘဲတွ … ဆိုဂဲ့ယင်
ဟတ်လူ ဥကြောင်နဲ့ ဥအောင်ဘု .. ခညားဒို့ဂိုလည်း ယီးဘဲ …. လို့ ပြန်ဆော်ပလိုက်မှာပေါ့ …
ဒါက ချစ်လို့ ဆဲဒါ …..
ဘာရယ်ဟုတ်ဘူးးး ကြုံဒုံးလေး ဝင်ပေါလိုက်ဒါဘာ …
အလုပ်ထဲမှာ အိပ်ငိုက်နေတုန်း ဒီ Post ကိုဖတ်မိတယ်ဗျာ…. post ရဲ့ဆိုလိုရင်းတောင် ဘာမှန်း မသိတော့ဘူး..
Comments တွေဖတ်ပြီး အူနှိပ်နေအောင် ရီလိုက်ရတာ… ဒါ့ကြောင့် မာမွတ်ခိုင်ရဲ့ နေပူဒေါ်မြို့ကို သဘောကျတာ…